Yini i-heliograph, yenzelwe ini futhi isebenza kanjani | Isimo Sezulu Senethiwekhi
Enye yamadivayisi asetshenziswe kakhulu ukukala ukugqashuka yi I-Heliograph. I-Sunstroke yinani lamahora ilanga elikhanye endaweni ethile phakathi nosuku. Ngenxa yalolu cingo, ukukhanya kwelanga okuwela endaweni kungarekhodwa ngemuva kwezinsuku ezimbili. Ngale ndlela, ubude bezinsuku ezimbili baziwa ngokuphelele kulo lonke isikhathi sokuhamba kwezinkathi.
Kulesi sihloko sizokutshela ukuthi i-Heliograph iyini, yiziphi izici zayo nokuthi isetshenziswa kanjani.
1 Yini i-Heliograph
2 Ungayisebenzisa kanjani iHeliograph
3 Ungayichaza kanjani imininingwane
It is a device that is used to measure the insolation that ukufinyelela ebusweni ngosuku oluthile. IHeatstroke yaziwa nangokuthi inani "lelanga elisebenzayo" elifinyelela ngaphezulu. Le divayisi yakhiwa irekhoda lokukhanya kwelanga eliqukethe ibhola eliqinile lengilazi elicishe libe ngamayintshi amane ububanzi. Leli bhola levidiyo eliqinile lisetshenziswa njengelensi ukuze likwazi ukugxila kuyo yonke imisebe yelanga ngokugxila eduze kwalo. Njengoba ilanga lihamba lindiza esibhakabhakeni, lokhu kukhanya kudlula esiqeshini samakhadibhodi esimiswe ohlakeni lwensimbi ngokufana nevidiyo.
Lesi siqeshana samakhadibhodi sakhiwe njengesiyingi futhi sitholakala ngemuva kwebhola lengilazi eliqinile. Ukuhlungwa komthombo wokukhanya nokushisa kulanda umugqa ngokusebenzisa i-carbonization engaphezulu noma encane ngokuya ngamandla emisebe yelanga. Nakhu ukuthi ukulinganiswa kukalwa kanjani.
Emabhendi ungabona ukuthi imisebenzi imakwa kanjani kanye nengxenye yamahora osuku ngalunye. Usuku lonke amakhadibhodi ashisiwe ngenkathi kwenziwa umugqa ocijile noma kancane ngokuya ngenani lokukhanya elifikayo. Uma elokhu ekhanya njalo ngenxa yokuba khona kwamafu, umthombo wokukhanya awusebenzi ngakho-ke ulayini wokusha uphazamisekile. Uma ubuwula bunyamalala futhi, amakhadibhodi azoqala kabusha i-carbonization.
Ngokwengeza ubude bemigqa eshiswa usuku lonke, kungenzeka ukubona isikhathi esiphelele sokukhanya kwelanga nokuqedwa kosuku olufanayo. Kuyaziwa ngegama lengxenyenamba ye-insolation ku ubudlelwano obukhona phakathi kokungavumi kwangempela kosuku nalokho obekuzokwenzeka ukube ilanga belilokhu likhanya ngokuqhubekayo ebholeni le-Heliograph.
Ungayisebenzisa kanjani iHeliograph
Lezi zinsiza zibekwa ensikeni yokwakha okungenani noma kancane ukuphakama kwamamitha ayi-1.3 ukusuka emhlabathini. Lokhu kwenzelwa ukuthi kungabikho hlobo lwesithiyo olungalufihla elangeni. Indawo enhle yokubeka i-Heliograph ileyo evumela ukubonakala kwayo yonke i-zodiac ngaphezulu komkhathizwe nganoma yisiphi isikhathi sonyaka. Ngale ndlela, singalinganisa inani lokuzipholisa kwelanga kusuka ekuphumeni kwelanga kuye ekushoneni kwalo.
I-Heliograph kufanele ibekwe ngendlela elungisiwe yobubanzi bezindawo lapho sikhona. Masingakhohlwa ukuthi inani lokushiswa ngemisebe yelanga liyahluka kuye ngobubanzi kanye nobude esiyikho. Imisebe yelanga ifika ithambekele ngokwengeziwe njengoba sisondela ezigxotsheni. Ukubukeka ngokuphelele e-Ecuador. Le mishini ngokuvamile zenzelwe inani elincane lamaphethelo ajwayelekile aphenya ukungcola. Isibonelelo senzelwe ukushuna kokugcina ngedivayisi eguquguqukayo yobubanzi. Le yindlela esilawula ngayo ukumisa i-Heliograph ukuthi isebenze kunoma yiluphi uhlobo lobubanzi.
Iphikile ukuthi i-heliograph ilungisa i-latitude, kufanele futhi ivumelanise nobude bendawo. Indlela enhle yokwenza lokhu isuselwa ekulinganisweni kwesikhathi. Lesi senzo sinesibopho sokubala ngokunemba okwanele isikhathi sokudlula kwelanga nge-median yendawo ethile. Uma sisebenzisa i-Heliograph futhi ingalungiswa kahle, amamaki noma ukusha ngeke kufane nolayini ophakathi nendawo ofanayo. Ngakho-ke, Sibeka engcupheni yokulahlekelwa yimininingwane yokuzihlukanisa futhi singabi nezilinganiso eziqondile.
Lapho ilanga lihluka ngobude unyaka wonke, ukugxila kweHeliograph kuyashintsha ngokufanele. Lokhu kusho ukuthi kufreyimu yensimbi enikezwe ama-grooves kanye nemihlahlandlela sibona ukuthi ingalungiswa kanjani ekufuneni indawo efaneleke kakhulu yokwenza izibalo isikhathi ngasinye sonyaka.
Amabhande we-Heliograph ayimigqa eyisicaba sendawo. La mabhande anciphile ukuze akwazi ukuqondana cishe nayo yonke indawo yomkhakha.
Ungayichaza kanjani imininingwane
Uma ilanga belikhanya lingaphazanyiswa kulula ukubala amahora okukhanya kwelanga asebenzayo. Mane uthumele ubude bomugqa oshisiwe bese ubheka inani lamahora elanga eliqondile. Uma ilanga likhanye ngezikhathi ezithile, ukuqothulwa okuphelele kufanele kubalwe ngenye indlela. Udinga isiqeshana sephepha noma sekhadikhadi esinqunywe kahle emaphethelweni futhi sibekwe eceleni komugqa we-heliograph. Sisebenzisa ipensela elibukhali kakhulu ukukwazi ukumaka ubude obushisiwe. Isithombe selanga ngeke sibe khona. Ngezibalo, uma kungenjalo indingilizi encane, ngakho-ke ngasinye sezingxenye zesikhungo sesiyingi kufanele sithathwe njengesiqalo nesiphetho.
Ukuze ungenzi amaphutha lapho usebenzisa lezi zibalo, kungakuhle ukuthi usebenzise iphepha elikhethekile noma amakhadibhodi anethempulethi esiza ukugwema izibalo ezingeziwe. Kunemithetho ethile esungulwe ukubala amahora okukhanya kwelanga yi-INM. Isibonelo, uma indlela ishe kahle, ubude be-groove buzoncishiswa ngenani elilingana nengxenye yobubanzi bokugoba komphetho ngamunye.
Uma ukusha kuyindilinga, ubude besilinganiso somugqa kufanele bulingane nengxenye yobubanzi bokusha. Lapho ukusha kungaphezu nje kokusha okuncane endaweni eyodwa, kufanele kulinganiswe bonke ubude bomkhondo.
Ngiyethemba ukuthi ngalolu lwazi ungafunda kabanzi ngeHeliograph.
Indlela ephelele ye-athikili: Isimo Sezulu Senethiwekhi » Isimo sezulu » I-Heliograph